Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mitadiava vola amin'ny fijerena horonan-tsary miaraka amin'ity fampiharana ity
FunnyGo APP dia sehatra iray hijerena horonan-tsary. Amin'ity APP ity, ny mpampiasa dia afaka mijery horonantsary malaza an'aliny maimaim-poana ary mahazo vola.
HiSceneTeam dia namoaka FunnyGo App ho an'ny mpampiasa any Indonezia tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity. Hatramin'izao dia efa 1 tapitrisa ny olona nisintona ity App ity ary nahazo vola tamin'ny fijerena horonan-tsary tao aminy.
Ny zava-dehibe kokoa, rehefa mijery horonan-tsary, ny mpampiasa dia afaka mahazo vola mora foana amin'ny APP. Araka ny filazan'ny mpitantana ny vokatra ao amin'ny Hisceneteam, dia hahazo vola madinika volamena ny mpampiasa raha mbola misintona ny APP izy ireo, ary afaka manavotra izany ho vola. Ny mpampiasa dia afaka mahazo vola madinika volamena bebe kokoa amin'ny fijerena horonan-tsary amin'ny APP na fanasana namana hisintona Funnygo. Ao amin'ny Funnygo, misy olona nahazo Rp 100,000.
Ankoatra izany, misy hetsika maro ao amin'ny FunnyGo APP. Afaka mandray anjara amin'ny hetsika ireo mpampiasa ary mahazo valisoa bebe kokoa avy eo. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mahazo ny iPhone13 raha mandray anjara amin'ny "loteria".
Ny mpitantana ny vokatra ao amin'ny HiSceneTeam dia nanambara, mba hanomezana traikefa tsara kokoa ny mpampiasa, dia nanatsara ny vokatra i FunnyGo. Afaka misintona ny vola voalohany amin'ny andro iray ihany ny tsirairay raha mbola misintona ny APP izy ireo, ary horaisina avy hatrany ny vola. Afaka maka vola amin'ny alalan'ny fantsona maro toy ny Dana sy OVO ny mpampiasa.
Mba hiarahabana ny Taombaovao, dia hanomboka hetsika maro kokoa ny FunnyGo amin'ny volana Desambra, izay hampitomboana ny valisoa rehetra.